Usoro ọgwụ mgbochi a nwapụtara anakpo ga-egbu oge ịmalite njem mba ọzọ | iwughachi njem
Home » iwughachi » Usoro ọgwụ mgbochi nke akwadoro nwere ike igbu oge ịmalite njem mba ụwa
Usoro ọgwụ mgbochi nke akwadoro nwere ike igbu oge ịmalite njem mba ụwa
WTTC na-enye ịdọ aka ná ntị na-eso nchegbu ndị njem nleta na-eche ihu ka a tụgharịrị na ókèala n'ihi na mba enweghị ndepụta ndepụta zuru ụwa ọnụ ma kwado ọgwụ mgbochi COVID-19.
Enweghi nkwado zuru ụwa ọnụ iji kwenye na ndepụta nke ọgwụ mgbochi a nwapụtara, na -emepụtakwa nnukwu ihe mkpọbi ụkwụ ọzọ maka ịmalitegharị njem mba ụwa.
Akụkọ banyere ndị njem ezumike na-eche ihe mgbochi ịbanye na-arị elu, na-egbochi ụfọdụ ịbanye ụgbọ elu ha na-aga.
Odida mba adabataghi na otu usoro ogwu ana anabata na nke amara bu ihe na enye nsogbu.
Ighaghachi njem nke mba ụwa nwere ike igbu oge na-enweghị nkwado ntụgharị ụwa niile nke ọgwụ mgbochi COVID-19 a kwadoro, ka ekwuru World Travel & Tourism Council (WTTC).
Ndi otu njem njem nke uwa nile nke nochitere anya ndi njem njem njem nlegharị anya nke ụwa enyela ịdọ aka na ntị ya maka ihe ndi njem a na eche ihu na agahapụrụ na mba n'ihi na mba enweghi ndepụta zuru ụwa ọnụ mara ma kwado ha. Covid-19 ọgwụ mgbochi.
Nke a na-abịa ka ụbọchị ole na ole gachara ndị njem ezumike Britain, ndị e nyere ọgwụ Indian Covishield nke ọgwụ mgbochi Oxford / AstraZeneca, anabataghị ịbanye na Malta n'agbanyeghị na ọgwụ ahụ yiri ọgwụ mgbochi UK.
N'ime izu ole na ole gara aga akụkọ banyere ndị njem ezumike na-eche ihe mgbochi ịbanye na ịrị elu, na-egbochi ụfọdụ ịbanye ụgbọ elu ha na-aga.
WTTC kwenyere na ọzọ, enweghi nkwekọrịta nke mba ụwa iji kwenye na ndepụta nke ọgwụ mgbochi a kwadoro, na -emepụtakwa ihe ọzọ na-eme ka ndị ọzọ malitegharịa njem mba ụwa.
Nke a na-abịa n'agbanyeghị ọtụtụ ọgwụ mgbochi enwetawo nkwado nke World Health Organisation (WHO) ma ọ bụ Stringent Regulatory Authority (SRAs), dị ka UK na Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) na Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na US, na ndị European Medicines Agency (EMA).
Akụkọ banyere ndị njem na-agbagha n'ihi na ha nwere ọgwụ mgbochi 'na-ezighi ezi' ma ọ bụ ọgwụ mgbochi 'amatabeghị' emeela ka ndị ahịa na-echegbu onwe ha, na-egbochi ha ịdebanye akwụkwọ ma si otú a mebie mpaghara njem na njem njem.